🥇 ▷ WiZmote Wi-Fi oo kuxiran WiZmote - kontorool fog oo rakhiis ah oo nalalkaaga ah… ✅
WiZmote Wi-Fi oo kuxiran WiZmote – kontorool fog oo rakhiis ah oo nalalkaaga ah…
Qalab wax ku ool ah oo loogu talagalay kuwa doonaya inay xakameeyaan nalalka smart ee WiZ iyagoon marka hore bilaabin barnaamijka ama codsanaya Alexa ama Kaaliyaha Google, Wi-Fi WiZmote waa koronto fudud oo la awoodi karo oo sahlan oo kuu oggolaaneysa inaad xakameyso dhammaan nalalka WiZ qolka. Fogaanta fudud iyo fog ee waarta waxay leedahay daboolid heer sare ah oo aan fiicnayn iyo nolosha batteriga, laakiin ma jiro hab sahlan oo aad darbiga dusheeda ugu furi karto, kumana oggola (wali) inay kuu oggolaato inaad xakameyso goobta iftiinka. Wi-Fi Wi-Fi $ 15 wuxuu ku kacayaa iibka bishaan Abriil ka dib markii uu ka dooday CES bishii hore.
Wi-Fi WiZmote wuxuu leeyahay sideed badhammo, oo ay ku jiraan badhamada / badhanka, badhamada iftiinka habeenka, afar badhamada aad ugu jeceshahay inaad ku dhejin karto habka nalalka iyadoo la adeegsanayo barnaamijka mobilada ee WiZ, iyo roker dhalaalaya.
Qiyaasida kaliya laba wiqiyadood oo ay ku jiraan laba baytariyada AAA ah oo lagu rakibay, baybalka laftiisa (oo asal ahaan la wadaaga naqshad la mid ah tan WiZ infrared fog) ayaa dareensan mid fudud, quruxsan, laakiin adkeysi leh, oo leh gadaal dambeysa oo loo yaqaan ‘ergonomic dhabarka’ oo ka ilaaliya dhagaxa fog fog gadaal iyo gadaal. markaad ku fadhido meel siman.
Maadaama aysan lahayn gidaar gidaar ama nooc magnetic ama buufin dusha sare ah, ma jiro hab sahlan oo darbiga WiZmote loogu dhejiyo, si ku meelgaar ah ama dhanka kale. Marka laga hadlayo baytariyada AAA ee WiZmote u baahan yahay, laguma darin, marka waa inaad ku dhejisaa $ 15 qiimaha masaafada dhaadheer
Aasaasida iyo socodsiinta Wi-Fi Wi-Fi waa fududahay. Ka dib markaad socodsiiso barnaamijka mobilada ee ‘WiZ’, u gudub tabka ‘Home’, Touchez the “+” badhanka, Touchez WiZmote, ka dibna riix batoonka awooda fog fog saddex jeer.
Barnaamijka WiZ wuxuu ku helayaa koontaroolka fog fog qiyaastii hal ilaa laba ama wax u dhow. Kadib markii aad dejiso koontaroolka fog fog mid ka mid ah qolalkaaga, waad kufiican tahay inaad baxdo.
Hawlgal iyo wax qabad
Si ka duwan sidii hore IR WiZmote, oo kaliya shaqeysa markaad tilmaanta meesha fog fog ka toosiso nalka aad rabto inaad xakameyso, WiZmote Wi-Fi wuxuu xakameyn karaa dhammaan nalalka ku yaal qol hal mar. Sababta oo ah Wi-Fi fog fog ayaa si toos ah ugu xidhan laambadaada WiZ-Wi-Fi, halkii aad ka isticmaali lahayd router-kaaga, waxay u baahan tahay inay ku dhowaato qolka (in kastoo aysan ahayn). at boos) loogu talagalay WiZmote inuu shaqeeyo. Imtixaankeyga, kantaroolka fog wuxuu si buuxda u shaqeynayay 50 fiid. Sidoo kale waa in la ogaadaa in WiZmote Wi-Fi kaliya kuu ogolaaneyso inaad xakameyso hal qol iftiin ah markiiba; Haddii aad rabto inaad xakameyso nalalka qol kale, waxaad ubaahantahay inaad dib-u-dejiso aaladda fog fog qolka.
Waqtigaan la joogo, Wi-Fi WiZmote wuxuu xakameyn karaa oo keliya ilaa afar nooc oo iftiin ah, laakiin WiZ wuxuu ballan qaadayaa in taageerada masraxa khaaska ah ay ku taal khariidadda wadada.
Afarta badhan ee lambarrada lagu qoro ee WiZmote waxaa loo xilsaaray afar nalal oo aad ugu jecel qolka oo ay dejisay koontaroolka fog. Tusaale ahaan, haddii habka iftiinka uu yahay maya. 1 ayaa loo dhigayaa “cad oo diirran”, badhanka riixa “1” fog fog wuxuu u beddelayaa dhammaan nalalka (ku habboon) nalalka qolka si ay u diiriyaan cad cad. Nasiib darrose, uma samaysan kartid goob iftiin gaar ah mid ka mid ah afarta badhan, in kasta oo WiZ rep u ballanqaaday in muujinta noocaas ah ay imaan doonto “mustaqbalka.”
Dhanka kale, badhamada kale ee WiZmote Wi-Fi waxay ushaqeeyaan sidii aad filaysay, iyadoo badalidda / shidida uu daminayo dhamaan nalalka qolka ku shidida iyo deminta, iyo nalka nalka ee habeenkii u beddelo habka nalka habeenkii, halka nalka mugdiga ah badalku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad hagaajiso iftiinka
Wakiilka WiZ wuxuu sheegay in laba baytariyada AAA Wi-Fi WiZmote batteriga ay socon doonaan illaa labo sano, qeyb ahaan sababtoo ah raadiyaha-awoodda hooseeya ee Wi-Fi.
Waxaan rajeyneynaa WiZmote Wi-Fi inuu la imaado saxan darbi ah oo loogu talagalay rakibaadda fudud, waxaan rajeyneynaa in qaar ka mid ah baytariyada AAA ay ku jiraan xirmada. Taasi waxay tidhi, WiZmote Wi-Fi waxay qabataa waxay ku sheegto mid jaban, wayna fiicnaan doontaa xitaa marka WiZ uu taageero ka haysto xakameynta meelaha iftiinka.
Xusuusin: Markaad wax iibsato ka dib markaad taabato iskuxirka shayganaga, waxaa suuragal ah inaan helno komishan yar. Aqri siyaasaddeena isku xirka xiriirka wixii faahfaahin dheeri ah.